Hawaii ao amin'ny lisitra fitsangatsanganana Quarantine any New York
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Hawaii ao amin'ny lisitra fitsangatsanganana Quarantine any New York
Hawaii sy CDC
Rehefa nitazona voalohany tany Etazonia ny coronavirus COVID-19 dia nitsangana i Hawaii ho ohatra mamirapiratra momba ny zavatra tokony hatao raha te hanana virus io. Ny statistika dia ambany noho ny tranga vitsivitsy sy ny maty. Ny iray amin'ireo roa ambany indrindra amin'ny firenena raha ny zava-misy.
Saingy raha vao nanapa-kevitra ny governemanta Hawaii fa hanokatra ny valan-javaboary sy ny orinasa, ny nanomboka nitombo ny isany. Angamba diso ny fiheveran'ny olona ity fanandramana hamerina ny toekarena ao an-toerana ity ho toy ny fambara fa tsy azontsika ampiharina intsony ny lalàna momba ny fisian'ny virus.
Ny sisa tsy maintsy natao mba hahitana porofon'izany dia ny fitondrana fiara amin'ny alàlan'ny Ala Moana Beach Park. Ilay nanjary lao taloha, afa-tsy ireo vitsivitsy izay namakivaky ny valan-javaboary hanao fanazaran-tena isan'andro, dia niverina tamin'ny sary an-tsary "fomba teo an-toerana" niaraka tamin'ny tranolay, sakafo, ary vondrona misy fivoriana mihoatra ny 10, ary nanao izany tsy nisaron-tava na nifanalavitra .
Androany, na dia antenaina hiverina hiverina aza ireo isa, dia mbola ao anatin'ny isan'ireo tarehimarika telo isan'andro izy ireo. Noho io fahombiazana tsy dia tsara io dia nanapa-kevitra ny New York, Connecticut, ary New Jersey ny hametraka an'i Hawaii ao anatin'ny lisitry ny mpandeha izay mila kararanty mandritra ny 14 andro raha tonga hitsidika.
Mampihomehy, nivadika ny fironana, ary toerana tsy voafehin'ny tranga sy ny maty any amin'ny faritry ny fanjakana, indrindra ny New York, ny antontan'isa momba ny COVID-19 dia nihatsara tokoa raha ny isan'ny Hawaii kosa mandeha amin'ny lalana mifanohitra.
Ho fanampin'ny New York, Connecticut, ary New Jersey, South Dakota ary ny Nosy Virgin dia nametraka an'i Hawaii ao amin'ny lisitry ny torohevitra momba ny dia. Toa an'i Hawaii, misy fanjakana 29 hafa izay misy tranga coronavirus miakatra ambony.
Nilaza ny ben'ny tanànan'i Honolulu Caldwell ny fanjakana dia mety ho lasa toa an'i New York. “Isika vahoaka eto amin'ity nosy tsara tarehy nefa marefo ity dia mila miara-mivory. Mila mamonjy antsika tsirairay avy isika, ny olon-tiantsika, ary eny, mba hamonjy ny toekarentsika koa. Momba ny fiainana sy ny fahafatesana izao, ary ny toekarena salama dia miankina amin'ny vahoaka salama, ”hoy izy.